Computers & Technology » ဖုန်းဖြင့် ဂဇက်တွင် ပို့စ်တင်မည် ဆိုပါလျှင် …	15
Posted by Anzartone on Jul 27, 2014 in Computers & Technology, Know-How, DIY | 15 comments
MG သို့ မိမိအကောင့်ဖြင့် Login ဝင်ပုံ – ၂Blog URL နေရာမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ရိုက်ပါ။Username, Password နေရာမှာ မိမိ ပုံမှန် Login ဝင်တဲ့အခါ ရိုက်သလိုပဲ ရိုက်ပါ။
alinsett (gazette) says: မရှင်းတာ မရှိပါကြောင်းး
ရှင်းပါတယ်.. အံဇရာ… အဲဒီ… မြန်မာစာကသောင်းကနင်းတွေ မပေါ်အောင်…လုပ်လို့ ရပါကြောင်း…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3151
surmi says: ဖုန်းနဲ့စာရိုက်တာ မြန်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် လက်မနှစ်ချောင်းကို သုံးပါလေ ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12322
alinsett (gazette) says: သဂျားလေးကို..ပြောတာလား..ဦးဆာ..
အရီးခင် says: ကိုယ့်စိတ်ကို မနိုင်သူ အရီး မို့ အိတ်ထဲပါနိုင်တဲ့ Gadget များအားလုံး မှာ မြန်မာ Font ကို လုံးဝ ထည့်မထားပါ သောကြောင့် ဗဟုသုတ အဖြစ်သာ ဖတ်သွားပါကြောင်း မောင်မောင်အံ လေး။
lu lu says: အဲ့ ဒီ word press apk ကိုဘယ်က ယူရမှာလဲ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12490
ခင်ဇော် says: ကျန်တာ စိတ် အဝင်စားဝူးးး
padonmar says: ကေဇီရယ်၊
ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း says: မောင်အံ့ရေ..ဒေါင်းဆွဲပြီးစမ်းကြည့်တာ အဆင်ပြေပါတယ်..ပို့စ်တွေတော့ကြည့်လို့သိပ်မရချင်ဘူး..သို့ပေမယ့် ကျေးဇူးပါ..လမ်းမှာကြုံလို့တွေ့ရင် ဘီဘီတိုက်ပါ့မယ်..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4053
manawphyulay says: ဒါပေမယ့် ဖုန်းနဲ့စာရိုက်ရတာ တယ်မလွယ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ပိုစ့်တွေ ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေဘူး။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 958
မင်း ခန့် ကျော် says: မရှင်းတာတခုလောက်မေးပါရစေ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3725
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟိုတစ်​​ယောက်​….
အဲ့ပုံထဲက ဘီဒူရဲ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4672
ခင် ခ says: သြော် ငါ့လူနဲ့ နည်းပညာလေးမျှဝေမိပါတယ် ဗိုက်ခေါက်ကဆွဲခံရပါပေါ့ကိန်းဆိုက်လေ ဆိုသလိုဖြစ်ရတော့မယ်၊ သက်ဆိုင်သူကမေးနေပြီး ဘယ်သူပုံလဲတဲ့………….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2229
ရွှေတိုက်စိုး says: အံချာကောင်ကြီး အိုင်တီတမားဖစ်ပြီး… အလိုက်တာအေ…. present လုပ်ရင် ဘယ်တော့မှ ကိုယ်နဲ.သက်ဆိုင်တဲ့ ပုံတွေ မပါစေနဲ.
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အို …
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5045
Mr. MarGa says: ဂွတ်ထ… ဂွတ်ထ
လောလောဆယ်တော့ ဖုန်းနှစ်လုံး ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုနဲ့ တိုင်ပတ်နေတယ် (အလွတ်ဝင်ကြွားတာ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.
WordPress.org	Recent Commentsသျှားသက်မာန် on HaHa သောသူ အသက်ရှည်၏သျှားသက်မာန် on ခေတ်နဲ့အညီ . . ထီ ထီ ထီသျှားသက်မာန် on ရှိတာလေးနဲ့ ရအောင်နယ်, နယ်တာလေးနဲ့ ဝအောင် စားသျှားသက်မာန် on ” အဆုံးသတ်ကစားပွဲ “သျှားသက်မာန် on မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီkai on အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – မေလ ၂၀၁၇kai on အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – မေလ ၂၀၁၇kai on မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီsurmi on မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီသင့်အေးရိပ် on မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XLVသင့်အေးရိပ် on မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီkai on မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီkai on ” အဆုံးသတ်ကစားပွဲ “သင့်အေးရိပ် on ” အဆုံးသတ်ကစားပွဲ “သင့်အေးရိပ် on ” အဝေးသတင်း “Category	Arts & Humanities
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10alinsett (100079 Kyats )Anzartone (95532 Kyats )kyeemite (91938 Kyats )weiwei (83466 Kyats )SP (81226 Kyats )padonmar (76920 Kyats )blackchaw (76605 Kyats )Foreign Resident (59119 Kyats )monmon (58709 Kyats )aungmoethu (57321 Kyats )Zawgyi/Myanmar3Font	Myanmar 3-Win/Mac